कमल थापालाई पराजित गर्ने सांसदको चुनावी अनुभव– यसपाली जनताले पो कुरा बुझाइदिए
Friday, 15 Dec, 2017 11:49 AM
प्रतिनिधिसभाको खर्भरै भएको चुनावमा मकवानपुर १ बाट राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई पराजित गरेर सांसद निर्वाचित भएका एमाले मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दाहाल यसपटकको चुनाव विगतका चुनाव भन्दा कम चुनौतिपूर्ण रहेको ठान्छन् । थापासँग लगातार ४ पटक चुनाव लडेका दाहालले तीन पटक उनलाई पराजित गरेका थिए भने एकपटक थापाबाट पराजित भएका थिए । तर, यसपटक दाहालको चुनावी अनुभव भने बेग्लै रहेछ । चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने– ‘राष्ट्रिय एजेण्डा सहि भएर नेतृत्वले प्रसंशायोग्य भूमिका निभाएपछि जनतालाई कुरा बुझाउनु पनि पर्ने रहेनछ, यसपटक त जनताले चाहिँ हामीलाई एमालेको भूमिका ठीक छ भनेर कुरा बुझाइदिए । अनि चुनाव जित्यौं ।’ दाहालसँगको अन्तरवार्ताः
यहि ठाउँबाट राजनीति गरेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई तपाईंले तीन पटक हराउनु भयो । के थिए तपाईंले जित्नुका कारण ?
पहिलो कुरा त जनताले यस देशमा परिवर्तन चाहेका छन् । त्यो परिवर्तन कुन दलले गर्न सक्छ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर नौ महिना सरकार चलाउँदा के गर्नु भयो, के गर्न खोज्नु भयो, के गर्न दिएनन् जनतालाई थाहा थियो । अर्को कुरा एमाले सरकारमा हुँदा र नहुँदा पनि राष्ट्रियताको पक्षमा, देशको स्वधीनताको पक्षमा, स्वाभिमानको पक्षमा र समृद्धिको बाटो खोल्ने पक्षमा जुन भुमिका खेल्यो त्यो जनताले भोगेर आए, हामीले भनिरहनु परेन । अनि पछिल्लो समयमा एमाले र माओवादी दुई पार्टी एक भएर आउने कुराले पनि जनतामा झनै विश्वास थप्यो ।
हो तपाईंले भने जस्तै हिजै लामो समय जितेका कमल थापाले हारे । एक, जनताले परिर्वतन चाहेका थिए । दोस्रो, लामो समयसम्म रहिरहेको संक्रमण अत्य गर्नु थियो । तेस्रो, मैले ४० वर्ष यहि क्षेत्रमा बसेर गरेको सेवाको मत पनि हो यो । यसरी मेरो लगन, राष्ट्रिय एजेण्डा र जनताको एमाले र वाम गठबन्धन प्रतिको विश्वास सबै कुराले काम गरेको छ ।
चुनावमा कस्ता चुनौती झेल्नुभयो ?
हामीले कहिल्यै चुनौती महसुस गरेनौं । किनकि जनताले परिवर्तन चाहेका छन् भन्ने कुरा मैले बर्षौ यहाँ बसेर महसुस गरेको थिएँ । म मकवानपुरमा चार पटकसम्म पार्टीको अध्यक्ष भएर काम गरेर जनजनको समस्यामा पुगेको थिएँ । हामी जित्छौं भन्नेमा म ढुक्क थिएँ । अर्को, वाम सबै एकै ठाम थियौं, एकताको बल थियो । त्यस्तै पार्टीले लिएको देश समृद्धिको बाटो नै हामीले चुनाव जित्ने आधार थियो । यसपटक हामीले जनतालाई बुझाउनु परेन, एमालेलाई किन भोट दिने भनेर जनताले नै हामीलाई बुझाउँथे । राष्ट्रिय हितमा एमालेको नेतृत्वले प्रसंशायोग्य काम गरेकाले यस पटकको चुनाव चुनौती विहीन रुपमा जितियो । जनता सचेत नभैदिएको भए हाम्रो केहि लाग्दैनथ्यो ।
हेभीवेट ठानिएका राप्रपा अध्यक्षसँग लड्दा त्यो ठूलो पदले कत्तिको थिच्यो चुनावको समयमा ?
त्यस्तो केही भएन । किनकि उहाँ कहिलेकाहिँ आउने नेता, म सधैं यहिँ बसेर जनताको काम गरेको मान्छे । जनताले उहाँलाई टाढाबाट आउनु भएको भनेर सम्मान गरे, मलाई भोट दिए ।
चुनाव त जित्नु भो, अब तपाईंलाई भोट दिएका जनताको मतको कदर गर्ने योजना के के छन् ?
यो जिल्ला भनेको चुरे क्षेत्रले ओगटेको जिल्ला हो । यहाँ दुर्गम क्षेत्र पनि छ । यहाँ धेरै खहरे खोला र चुरे बस्ती छन् । खहरे खोलाले बर्खामा बगाउने र अरु समय सुख्खा हुने यो बस्तीलाई सुरक्षित साथै खानेपानी पुर्याउनु कृषि प्रणालीलाई आधुनिकतातिर लानु, जनजनमा रोजगारी पुर्याउँदै यहाँको जीवनस्तर उकास्नु, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनु, मेरो काम हुनेछ । यसप्रति म इमान्दार भएर काम गर्ने छु ।
अर्को कुरा तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी हामीले हेटौंडा भनेका छौं । यो उपयुक्त, पनि हुनेछ । किनकि राज्य एकै ठाउँ भयो भनेर केन्द्रिकृत राज्यलाई विकेन्द्रित गर्न यो एकदमै उपयुक्त हुनेछ । यसमा पनि मेरो पहल रहनेछ ।
नतिजा आएपछि कमल थापाले तपाईंलाई वधाई दिनु भएन ?
त्यसरी भेट नै गरेर वधाई भन्न आउनु त भएन तर, ट्वीट मार्फत वधाई भन्नुभएको पढेको थिएँ । यो सद्भावको लागि उहाँलाई पनि आभार ब्यक्त गर्न चाहान्छु । अघिपछि भेटिन्थ्यौं तर हामी चुनाव प्रचारका क्रममा पनि भेट भएनौं । हामीले लोकतन्त्रको मर्म अनुसार बाहेक एक अर्कोलाई आक्षेप लगाउने काम गरेनौं । साँच्चै भन्छु, कुनै तिक्तता बिना नै हामी चुनावमा थियांै । उहाँले ३५ हजार भोट ल्याउनु भयो मैले ४० हजार ल्याएँ । हामीले कहिल्यै एक अर्काको अनुहारमा हिलो छ्याप्ने काम गरेनौं ।
जसले मलाई मत दिएर जिताउनु भयो आज पनि म उहाँहरुको घरदैलोमा धन्यवाद दिन हिंडेको छु । मसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनु भएका कमल थापाजीलाई पनि तपाईंको मिडिया मार्फत मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धाका लागि र सद्भावका लागि धन्यवाद दिन्छु । मेरो जीत स्थिर सरकारको लागि हो, त्यस अर्थमा मैले जित्दा उहाँ पनि खुसी नै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु ।